Maongorori akaenzana anonyadzisa vatori vechikamu; iyo inogona kuchinja, uye inofanira kuchinja.
Kusvika ikozvino, ndakakuudza nezvemitsva itsva yekukumbira iyo inofambiswa nehurukuro inobvunzurudzwa nekombiyuta. Zvisinei, rimwe rutsigiro rwekubvunzurudzwa kwemakombiyuta ndeyekuti hakuna munhu anobvunzurudza munhu kubatsira kubatsira nekuchengetedza chikamu. Ichi chinetso nokuti dzakawanda tsvakurudzo zvose zvinopedza nguva uye zvinotyisa. Nokudaro, mune ramangwana, vaongorori vekuongorora vachazofanira kuronga vachipoteredza avo vatori vechikamu uye kuita shanduro yekupindura mibvunzo inonakidza uye yemutambo-yakafanana. Iyi nzira dzimwe nguva inonzi gamification .
Kuenzanisira kuti kutsvakurudza kunofadza kungaita sei, regai tione Shamwari, tsvakurudzo yaive yakaiswa mumutambo semutambo pa Facebook. Sharad Goel, Winter Mason, naDuncan Watts (2010) vaida kuenzanisa kuti vanhu vanofunga kuti vakafanana sei neshamwari dzavo uye kuti zvakadini sevanoshamwaridzana neshamwari dzavo. Uyu mubvunzo pamusoro pechokwadi uye unoona kufanana kwakafanana kunowanikwa zvakananga nekukwanisa kwevanhu kunyatsonzwisisa maitiro avo emagariro evanhu uye kune zvakakonzerwa nekugadzirisa zvematongerwe enyika uye kusimba kwekuchinja kwevanhu. Kunyengedza, chaiye uye maonero akafanana kufanana chinhu chiri nyore kuverenga. Vatsvakurudzi vanogona kukumbira vanhu vakawanda nezvemaonero avo vozobvunza shamwari dzavo maererano nemafungiro avo (izvi zvinobvumira kuyerwa kwechibvumirano chemaonero chaiwo), uye vanogona kukumbira vanhu vakawanda kuti vafungidzire mafungiro evamwe shamwari (izvi zvinogonesa kuenzanisa kwekufunga kwepfungwa ). Zvinosuruvarisa, zvinenge zvakaoma zvikuru kubvunzurudza vose mubvunzo uye shamwari yake. Nokudaro, Goel uye vashandi vakashandura tsvakurudzo yavo muIndaneti purogiramu yakanga inonakidza kutamba.
Mushure mokunge mumwe mubati akabvumirana kuva muongororo yekutsvakurudza, purogiramu yacho yakasarudza shamwari kubva kuAlex account yeaipindura uye yakabvunza mubvunzo pamusoro pemafungiro emuyo shamwari (mufananidzo 3.11). Akasangana nemibvunzo pamusoro pehama dzakasarudzwa, munhu anopindurawo akapindura mibvunzo pamusoro pake. Mushure mokupindura mubvunzo pamusoro peumwe shamwari, muteereri akaudzwa kana mhinduro yake yakanga yakarurama kana, kana shamwari yake isina kupindura, muteereri akakwanisa kukurudzira shamwari yake kupinda. Nokudaro, kuongororwa kwakapararira muchikamu kuburikidza nekutsvaga hutachiwana.
Mufananidzo 3.11: Interface kubva kuChidzidzo cheMuniti Smith (Goel, Mason, and Watts 2010) . Vatsvakurudzi vakashandura tsvakurudzo yemafungiro evhudziro mumutambo unofadza, wakaita semutambo. Purogiramu yacho yakabvunza vatori vechikamu mibvunzo miviri yakakomba uye mimwe mibvunzo yakajeka, yakadai yakaratidzwa mumufananidzo uyu. Zviso zvehama zvave zvichinyangadza nemaune. Yakadzorerwa nemvumo kubva kuSharad Goel.
Mhinduro dzemibvunzo dzakashandurwa kubva kune General Social Survey. Somuenzaniso, "[shamwari yako] inonzwira tsitsi neVaIsraeli kupfuura vePalestine muMiddle East mamiriro ezvinhu here?" Uye "Dai [shamwari yako] inobhadhara mitero yakakwirira kuti hurumende ipe hutano hwakakwana here?" Pamusoro pemibvunzo iyi yakakomba , ivo vanotsvakurudza vakavhengana nemibvunzo yakajeka: "Iwe [shamwari yako] ingangodha kunwa waini pane doro here?" uye "Dai [shamwari yako] ingava nesimba rekuverenga pfungwa, pane simba rekubhururuka here?" Iyi mibvunzo yakajeka yakaita kuti kuronga kunakidza kune vatori vechikamu uye kwakabatsirawo kuenzanisira kunofadza: kunge maonero echibvumirano angave akafanana nemibvunzo yakaoma yezvematongerwe enyika uye nekuda kwemibvunzo isina kunaka pamusoro pokunwa uye simba guru?
Paiva nemitatu mikuru kubva mukudzidza. Kutanga, shamwari dzaiwanzopa mhinduro imwechete kupfuura vausingazivi, asi kunyange shamwari dzepedyo dzichiri kubvumirana pamusoro pe30% yemibvunzo. Chechipiri, vakapindura vakanyora chibvumirano chavo neshamwari dzavo. Mune mamwe mazwi, zvakawanda zvekusiyana kwemaonero anowanikwa pakati pevamwe shamwari hazvionekwi. Pakupedzisira, vatori vechikamu vaigona kunge vachiziva kusawirirana neshamwari dzavo pamatambudziko makuru ezvematongerwo enyika seine nyaya dzisinganzwisisiki pamusoro pokunwa uye simba guru.
Kunyange zvazvo purogiramu yacho inosuruvarisa haichawanikwi kutamba, yakanga iri muenzaniso wakanaka wekuti vatsvakurudzi vanogona sei kuongorora shanduko yemafungiro mune chimwe chinhu chinonakidza. Kunyanya kakawanda, neine humwe hunyengeri uye basa rakagadzirwa, zvinogona kuvandudza musikana-chiitiko chevadzidzi vanoongorora. Saka, nguva inotevera iwe uri kugadzira kuongororwa, tora nguva yekufunga pamusoro pezvaungagona kuita kuti ruzivo rwako ruve nani kune vatori vechikamu. Vamwe vanotya kuti matanho aya ekugadzirisa zvinogona kukuvadza hutano hwemashoko, asi ndinofunga kuti kuvhiringidza vatori vechikamu kune ngozi yakawanda zvikuru yekuwedzerwa kwe data.
Basa raGoel neshamwari pamwe chete rinoratidzira musoro wechikamu chinotevera: kubatanidza kutsvakurudza kune makuru makuru emvura. Muchiitiko ichi, kuburikidza nekubatanidza kuongororwa kwavo ne Facebook vatsvakurudzi vakangove vaine ruzivo rwerwendo rwevadzidzi vevadzidzi. Muchikamu chinotevera, tichakurukura kuwirirana pakati peongororo uye hurukuro yezvinyorwa zvakadzama.